အသက် (၉၂) နှစ် ကနေ အသက် (၁၁) နှစ် အထိ အရွယ်စုံ ပါဝင် လာခဲ့တဲ့ စစ်တွေ မြို့ ကိုဗစ်ဂယက်…. – Let Pan Daily
အသက် (၉၂) နှစ် ကနေ အသက် (၁၁) နှစ် အထိ အရွယ်စုံ ပါဝင် လာခဲ့တဲ့ စစ်တွေ မြို့ ကိုဗစ်ဂယက်….
စစ်တွေမှာ ဒေသ တွင်း ကူးစက်သူ ၁၃ ဦး ထပ်တွေ့၊ အသက် ၉၂ နှစ် ကနေ အသက် ၁၁ နှစ် အထိ အရွယ်စုံ ပါဝင် ကျန်းမာရေး နဲ့ အားက စား ဝန်ကြီး ဌာန ရဲ့ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် မနက် ၈ နာရီ ထုတ်ပြန်ချက် အရ ရခိုင် ပြည်နယ် မြို့တော် စစ်တွေ မှာ နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ရာဇဝင် မရှိဘဲ အတည်ပြု လူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုကနေ ဒေသတွင်း ကူးစက်ခံရသူ အသစ် ၁၃ ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် သူတွေ ရက်ဆက်တွေ့လာရလို့ သြဂုတ် ၁၆ ရက်ကနေ ဒီနေ့ ၂၄ ရက် အထိ စစ်တွေ၊ မြောက်ဦးနဲ့ သံတွဲ မြို့တွေမှာ ကိုဗစ်လူနာ ၇၂ ဦးရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ် ၂၄ မနက် ထုတ်ပြန်ချက် ပါ အတည်ပြု လူနာ အသစ်တွေမှာ အသက် အငယ်ဆုံး ၁၁ နှစ် က နေ အသက်အကြီးဆုံး ၉၂ နှစ် အထိ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သူတို့ အားလုံးဟာ အတည်ပြု လူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့မှု ရှိခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပြီး အသွားအလာ ကန့်သတ် ထားရှိသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သြဂုတ် ၂၄ ရက် မနက် အထိ ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၄၆၃ ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
စဈတှမှော ဒသေ တှငျး ကူးစကျသူ ၁၃ ဦး ထပျတှေ့၊ အသကျ ၉၂ နှဈ ကနေ အသကျ ၁၁ နှဈ အထိ အရှယျစုံ ပါဝငျ ကနျြးမာရေး နဲ့ အားက စား ဝနျကွီး ဌာန ရဲ့ သွဂုတျလ ၂၄ ရကျ မနကျ ၈ နာရီ ထုတျပွနျခကျြ အရ ရခိုငျ ပွညျနယျ မွို့တျော စဈတှေ မှာ နိုငျငံခွား ခရီးသှား ရာဇဝငျ မရှိဘဲ အတညျပွု လူနာတှနေဲ့ ထိတှမှေု့ကနေ ဒသေတှငျး ကူးစကျခံရသူ အသဈ ၁၃ ဦး ရှိခဲ့ပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျမှာ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျ သူတှေ ရကျဆကျတှလေ့ာရလို့ သွဂုတျ ၁၆ ရကျကနေ ဒီနေ့ ၂၄ ရကျ အထိ စဈတှေ၊ မွောကျဦးနဲ့ သံတှဲ မွို့တှမှော ကိုဗဈလူနာ ၇၂ ဦးရှိလာပွီ ဖွဈပါတယျ။ သွဂုတျ ၂၄ မနကျ ထုတျပွနျခကျြ ပါ အတညျပွု လူနာ အသဈတှမှော အသကျ အငယျဆုံး ၁၁ နှဈ က နေ အသကျအကွီးဆုံး ၉၂ နှဈ အထိ ပါဝငျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
သူတို့ အားလုံးဟာ အတညျပွု လူနာတှနေဲ့ ထိတှမှေု့ ရှိခဲ့သူတှေ ဖွဈပွီး အသှားအလာ ကနျ့သတျ ထားရှိသူတှေ ဖွဈတယျလို့ ထုတျပွနျခကျြမှာ ပါရှိပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ သွဂုတျ ၂၄ ရကျ မနကျ အထိ ကိုဗဈ-၁၉ အတညျပွုလူနာ စုစုပေါငျး ၄၆၃ ဦး ရှိပွီ ဖွဈပါတယျ။
“အကျပ်အတည်း ကာလမှာ ကိုယ်ကျိုး စွန့်ပြီး ကူညီခဲ့ သူတွေရဲ့ ကျေးဇူး ကို မမေ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်”
သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် များ ၂၀၂၀ ရွေးကောက် ပွဲဝင်မည်
လူတိုင်း ရင်ထဲမှာ ရှိနေမယ့် မိခင်မေတ္တာရနံ့ နဲ့ ချက်ပြုတ် ထားတဲ့ အမှတ်တရ ဟင်းတစ်ခွက်